अमेरिकी जनगणना २०२० मा नेपाली किन छुट्नु हुँदैन? अनलाईन फर्म कसरी, कहाँ भर्ने?
Exclusive: अमेरिकी सरकारले हरेक दश वर्षमा लिने जनगणना यो वर्ष अप्रिल १ तारिख Census Day (जनगणना दिवस) कै रूपमा शुरू हुँदैछ। नेपाली अमेरिकी समुदायले जनगणनामा सकृयतापूर्वक भाग लिन थालेको सन् २०१० को जनगणनादेखि हो तर विगतमा जेजति भए पनि यो वर्ष सन् २०२० को जनगणनामा नेपाली समुदायको पुराकापुरा जनगणना हुनु समुदायको चौतर्फी हकअधिकारको निम्ति अपरिहार्य कडी हो। समुदायलाई लक्षित गरी प्रदान गरिने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, तालिम, बाटोघाटो र अनेक सरसुविधा जनसंख्याको तथ्यांकको भरमा दिईन्छ। त्यसैले नेपाली समुदायले जनगणनामा आफ्नो, आफ्नो परिवार, आफन्त रसाथीभाईहरूको नाम दर्ज गराउन कुनै कसुर बाँकी राख्नु हुँदैन।
यो वर्षदेखि जनगणना अनलाईनबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकोछ। कम्यूनिटी सर्भे भर्न यो लिंकमाजानुहोस्: